छोरालाई कुरा लगाएर बुहारी कुटाउने कहिलेसम्म ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
छोरालाई कुरा लगाएर बुहारी कुटाउने कहिलेसम्म ?
- वैकुण्ठ ढकाल
‘मामु म एक दिनभरी तपाँईको काखमा बस्छु । अनि कुरा गर्छु ल । बाबाआमा नभएको बेलामा । मामु धेरै कुरा गर्नुछ तपाँईसंग । ६ बर्षकी छोरीले आमासँग कुराकानीका लागि याचना गर्दा आमाको मन कस्तो होला ? मामु मलाई आमा (हजुरआमा)ले लालीपप किनिदिएर मामुसंग बस्ने, सुत्ने, खाने र बोल्ने नगर्नु भन्नुहुन्छ नि । अनि बाबासंग पनि तपाँई नभएको बेलामा तपाँईका नराम्रा नराम्रा कुरा गर्नुभयो नि ।’
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने घटनाहरु हुन्छन, नेपाली समाजमा । नातिनातीलाई लालीपप खुवाएर आमाबिरुद्ध उक्साउने र छोरालाई कुरा लगाएर बुहारी कुटाउने ? अनि जे जे भए पनि सहनु पर्छ भनेर महिला भेलाले सुझाब दिने । कस्तो चरित्र हुन्छ महिलाको । स्त्री चरित्र दैबले पनि जान्दैनन भनेको त्यसै होइन रहेछ भन्ने लाग्छ अहिले कतिपय घटनाहरु सुन्दा र देख्दा । बाहिरको काम केहि गर्न पनि नदिने, पढ्यो भने पनि टाउकोमा टेक्छे भनेर श्रीमतीलाई कोठामै थुनेर राख्ने अनि तेरो कमाई खै भनेर अन्नपानी बन्द गर्ने ? हरे पुरुष चरित्र पनि दया लाग्दो छ ।
भूगोलको दोष हो कि मानसिकताको तराईमा दाईजोको कारण हुने हिंसाका घटनाहरु धेरै आएका छन । आउन नसकेकाहरु भित्रभित्रै गुम्सिएर बसेका छन । बुहारीले बुहार्तन सहनु पर्छ भनेर सिकाइन्छ । सासु भेलामा तेरो छोराले बुहारी मात्रै ल्यायो कि, दाइजो पनि ल्यायो भनेर सोधिन्छ । बुहारीको पढाई, योग्यताको बारेमा कुनै सोधिखोजी हुँदैन । गरगहना, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामानहरु धेरै र ठूला आए भने वा तेरी÷मेरी बुहारी त्यसो नभए, छ्या तेरो÷मेरो बुहारी, यस्तो सोच र प्रबृत्तिबाट ग्रस्त छ । कोही कोहीले त दाइजो नल्याउने वा कम ल्याउने बुहारीसंग सम्बन्ध बिगारेर सम्बन्ध बिच्छेद गरी नयाँ भित्र्याउन समेत सुझाब दिएको समेत पाईयो ।
छिछि सुन्दा पनि घीन लाग्दो मानसिकता कहिले कसरी सुध्रने होला । आफ्नो छोरीलाई पनि भोलि त्यस्तै ब्यबहार भयो भने के गर्लान ? घरमा पसेपछि । बाबाममीको झगडा पर्ने भयो भने भोलि बालबालिकालाई कस्तो असर पर्ला ।
सिकाई समूहले बालबालिकालाई गर्ने ब्यबहार सिकाउने भनेर एउटा पुस्तक बजारमा ल्यायो, साँच्चै पढ्नै पर्ने पुस्तक छ त्यो । भारतीय लेखक गिजुभाइले लेखेको किताबलाई शरच्चन्द्र वस्तीले नेपाली परिबेश सुहाउँदो बनाएर अनुबाद गरेका छन नाम छ हामी आमाबाबु । सच्चा र असल आमाबाबु हुन खोज्नेहरुले एक पटक खोजेर पढे खेर जाँदैन ।
१२-१३ बर्ष अघि पत्रकार स्वागत नेपालको कोठामा पुगेको थिएँ, सबै जना साना छोरीहरुसंग तपाँई भनेर बोलिरहेका थिए । आफूभन्दा सानालाई तँ भन्ने परिबेशमा जन्मे हुर्केको मानिस हुँ म । साना नानीहरुलाई तपाँई भन्न जीब्रो फटकारिदै फटकारिएन, जम्मा एक घण्टा जतिको बसाई पनि मलाई कठिन साध्य भयो, साना नानीहरुलाई तपाँई भन्ने बानी लगाउन नसक्दा ।
लेखक : बैकुण्ठ ढकाल
छोराछोरीको परीक्षा आउँदा आफू पनि पढ्ने अभिभाबकहरु एकआध मात्रै भेटिन्छन । अन्यथा छोराछोरीलाई पढ् भनेर आफूचाहिं मस्त घुर्ने वा टिभिमा रमाउने धेरै छन । शहरको बसाई एउटै कोठामा सबै अटाउनु पर्ने छ । बाघ कराए जस्तो घुर्ने वा ठूलो स्वरमा टिभी घन्किरहँदा त्यही कोठाको एउटा कुनामा बसेर पढ्न अहिलेका कुन चाहिं छोराछोरी तयार होलान ?
साना नानीहरु कोठामा भएका टेबल कुर्सीमा ठोक्किएर रोए भनें आमाबाबु ल खा त भनेर टेबुल कुर्सीलाई थप्पड हान्छन । छोराछोरीले गल्ती गर्दा गालामा चड्काउँछन अनि छोराछोरीले हात फर्काउँदा आफूभन्दा ठूलो मानिसलाई हात हाल्ने भनेर सम्झाई बुझाई गर्न थाल्छन । ठेस लाग्दा टेबुल कुर्सीलाई थप्पड हानेर दिएको शिक्षा छोराछोरीले आफूलाई पिटेर ब्यबहारमा उतारेको बुझ्ने र बिश्लेषण गर्ने बुद्धि कहिले आउला खै ?
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्प गएको १९ महिना पूरा भइसकेको छ । अझै पनि काठमाण्डौंका घरहरु टेकोले अड्डिएका छन । अभिभाबकहरुले भूकम्पको बेलामा बाटो हिंड्दा घर भत्किएर किच्न सक्छ माथिमाथि हेरेर हिंड भनेर सिकाए, छोराछोरी त्यसैगरी हिंड्न थाले, तर घर अड्याउन राखिएका टेकोमा अल्झिएर लड्दा तीनै अभिभाबकले आँखा हेरेर हिंड्न सक्दैनस, हेर भर्खर किनेर वा धोएर लगाई दिएको लुगा मैलो बनायो ।
लुगा मैलो भयो भनेर छोराछोरीलाई गाली गर्ने हो कि ? चोटपटक लाग्यो लागेन हेर्ने हो ? अब बाटोमा हेरेर हिंड है भन्यो, छोराछोरी त्यसै गर्छन । केहि पर पुगेपछि शहरका घरका टुँडालमा बसेका चराले छोराको क्यापमा बिष्ट्याई दिन्छ, त्यहाँ पनि फेरी गाली खाने पालो बालबालिकाकै ? छोराछोरीको के गल्ती ? गल्ती बिनाको सजायँ दिन अभिभाबक माहिर छन । आफ्नै टाउकोमा बिष्ट्याउने चरालाई गुलेली हान्दा हुन या टोपी खोलेर धुँदा हुन ती अभिभाबकले ?
बालकैमा हो, डोकोको कथा सुनेको । मैले पनि अझै सम्झन्छु । स्वास्नीको कचकचले आफ्नै बाबुलाई डोकोमा हालेर भीरबाट फ्याँक्न हिंड्छ छोरो । हजुरबालाई फाल्न लगेको ठाउँमा नाति पनि संगै थियो । बीचबाटोमा पुगेपछि भन्यो बाबा, हजुरबालाई फ्याँके पनि डोको चाहिं नफ्याक्नु है । बालाई फ्याक्न हिंडेका छोरालाई आफ्नो छोराले प्रश्न गरे, किन र ? भोलि पर्सि तपाँईलाई फ्याक्ने बेलामा यही डोको काम लाग्न सक्छ । छोराको कुरा सुनेर बालाई फ्याँक्न हिंडेको छोरो बालाई बोकेर घर फर्कियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै बूढाबालाई गर्ने ब्यबहार फेरियो, बुहारीले पनि ससुराको राम्रो स्याहार गर्न थालिन । छोराछोरीलाई कस्तो ब्यबहार गर्ने र उनीहरुबाट कस्तो ब्यबहारको अपेक्षा गर्ने भन्ने आफ्नै हातमा छ । आखिर जे रोप्यो, त्यो त हो फल दिने ।